Qaxooti kaalmo la gaarsiiyay - BBC News Somali
Qaxooti kaalmo la gaarsiiyay
19 Disembar 2011
Image caption Dowladda Kuwait ayaa gargaar gaarsiisay qaxootiga Soomaaliyeed ee Ifo
Dowladda Kuwait iyo hay'ado samafal oo ka socda dalkaasi, ayaa cunno iyo daawooyin ku qeybiyay xerada qaxootiga ee Ifo ee ku taalo gobolka Woqooyi-Bari ee dalka Kenya.
Waxaa kale oo ay halkaasi geeyeen Takhaatiir guurguuraysa oo ka howl gelaya halkaasi. Takhaatiirktii ka howlgali jirtay xeryaha qaxootiga ayaa halkaasi laga daad gureeyay sababo la xiriira ammaanka awegeed, kadib markii laba takhtar oo u shaqeeya hay'adda takhaatiirkta aan xuduuda lahayn laga afduubay halkaasi.
Howl wadeennada ayaa filaaya in ilaa 50,000 oo qof ay ka faa'idaysan karaan gargaarkani. Dr Abdiweli Bashir oo kamid ah takhaatiirkta halkaasi ka howlgelaya ayaa BBCda u sheegay in cudurrada halkaasi ku badan ay kamid yihiin nafaqo darro iyo shuban.
Dr Abdiweli ayaa sheegay in cudurrada qaarkood ay la xiriiraan roobabka lixaad leh ee halkaasi ka da'ay iyo nadaafad darro.